OIC နှင့် NLD အမည်များသုံးရျ် သတင်းအမှား ဖြန့်ချိ – Nyang Media
OIC နှင့် NLD အမည်များသုံးရျ် သတင်းအမှား ဖြန့်ချိ
အာဏာရပါတီကို လုပ်ကြံတာ၊ သူ့ကိုနည်းမျိုးစုံနဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ အထဲမှာ အဲဒီအသံတွေက ပိုပြီးကျယ်လောင်လာတယ်ပေါ့။နဂိုကတည်းက လူမျိုးရေး ဆတ်ဆတ် ထိမခံ ထိရှလွယ်တဲ့ တိုင်းပြည်မှာ …
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ NLD ပါတီအနေနဲ့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှစတင်ပြီး ပါတီထူထောင်ရပ်တည်ရေး၊ ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိုင်ရေး၊ အစိုးရဖွဲ့နိုင်ရေး အတွက် OIC ထံမှ ကူညီ ထောက်ပံ့ မှုများ ရယူခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ သတင်းအမှား တစ်ပုဒ် အကြောင်း ပြောပြလိုပါတယ်။
သည် သတင်းကို သြဂုတ်လ(၁၂)ရက်နေ့က တိုင်းကျော် သတင်း လို့ အမည်ရတဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေ့ချ်မှာ ဖြန့်ချိခဲ့တာဖြစ်ပြီး မှတ်ချက်ပေးသူ အများအပြားနဲ့ ပြန်လည် ဝေမျှသူ လေးထောင်နီးပါး ရှိတာ ကို တွေ့ရ ပါတယ်။တခြား ဂရုတွေမှာလည်း သည်သတင်းကို ပြန်လည် မျှဝေ တာ၊ မှတ်ချက်ပေးတာမျိုးတွေလည်း တွေ့ရပါတယ်။
သတင်း အမှား/အမှန် အချက်အလက်စစ်ဆေးခြင်း
တိုင်းကျော် သတင်း ဖေ့စ်ဘွတ်ပေ့ချ်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ သတင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတင်း မှား/မှန် အချက်အလက်စစ်ဆေးခဲ့ရာမှာ တိုင်းကျော်ဖေ့စ်ဘွတ်ပေ့ချ်ကနေ ဖော်ပြထားတဲ့ မူရင်း သတင်းလင့်ခ် လို့ ညွှန်းဆိုထားတဲ့ WWW.OIC.MYANMAR.cccccmf. [email protected] ဆိုတာ လုံးဝ (လုံးဝ) မရှိဘဲ အများပြည်သူ ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်အောင်၊ဝေဝါးသွားအောင် လုပ်ကြံ ဖန်တီးထားချက် တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
သည်သတင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး NLD ပါတီဗဟိုပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး မုံရွာအောင်ရှင် ကို ဆက်သွယ်ပြီး သတင်း အမှား /အမှန် အချက်အလက် စစ်ဆေးခဲ့ရာ သတင်းအမှားသာ ဖြစ်တယ်လို့ မုံရွာအောင်ရှင်က ငြမ်းမီဒီယာကို အတည်ပြုပြောကြားပါတယ်။
” အိုအိုင်စီနဲ့ ကျနော်တို့ ဘယ်လိုမှ မပတ်သက်ဘူး။အဲ့ဒါကို ကျနော် အတိအလင်းပြောတယ် ” လို့ မုံရွာအောင်ရှင် က ပြောပါတယ်။
အခုရက်ပိုင်းအတွင်း အိုအိုင်စီနဲ့ NLD ပါတီ ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲ ပြောဆိုမှုတွေ ထွက်ပေါ်လာပြီး နောက်တစ်ပြိုင်နက်တည်း ဆိုသလို လူထုကြားထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ သတင်းအမှား ဖြန့်ချိလာတာကို တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
“ စွပ်စွဲမှုတွေက ဘာမှ အခြေအမြစ် မရှိဘူး။ အခု ပြန်ပြီး မတုံ့ ပြန်သေးတာက စွပ်စွဲပြောဆိုသူတွေ မှန်နေလို့ မတုံ့ပြန်တာ မဟုတ်ဘူး။ ဥပဒေပညာရှင်တွေနဲ့ ညှိနှိုင်းပြီး လုပ်နေတဲ့အတွက် ဒီလိုအခြေအနေထိအောင် ရှိနေတာပါ ” လို့ မုံရွာအောင်ရှင်က ငြမ်းမီဒီယာ ကို ပြောပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲ နီးလာတာနဲ့အမျှ သည်လို သတင်းအမှားတွေ သည်ထက် ဆိုးတာတွေလည်း လုပ်လာကြဦးမည်ဟု ယူဆပြီး သည်လို သတင်းအမှားနဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေကို တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ မုံရွာအောင်ရှင် က ဆိုပါတယ်။
တိုင်းကျော် သတင်း လို့ အမည်ရတဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ သတင်းကတော့(သည်နေရာမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်) အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
× NLD အစိုးရအား တရားစွဲဆိုနိုင်ဖို့ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအနေဖြင့် လက်မှတ်ထိုးတောင်းဆို ကြရန် OIC အဖွဲ့အတွင်းရေးမှူးတိုက်တွန်း ဟုဆို
မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ လက်ရှိအာဏာရ NLD အစိုးရ နှင့်NLD ပါတီ ကို တရားစွဲဆိုနိုင်ရေး အတွက် မိမိတို့ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ များအနေဖြင့် OIC အဖွဲ့ချုပ်ထံလက်မှတ်ထိုး တောင်းဆိုကြဖို့ OIC အဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ချုပ် Yousef bin Ahmad Al Othaimeen ( ယူစွတ်ဘင် အယ်လ် အော်တိုင်းမင်း) က တိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ကြောင်းသိရသည် ။
မြန်မာအစိုးရ အဖြစ်တာဝန်ယူနေသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင် တဲ့ NLD ပါတီအနေဖြင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှ စတင်ပြီး ပါတီထူထောင်ရပ်တည်နိုင်ရေးနှင့် ရွေးကောက်ပွဲများတွင် ပါတီအောင်နိုင်ရေးနှင့် အစိုးရ အဖွဲ့ဖွဲ့နိုင်ရေး အတွက် မိမိတို့ OIC အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ ထူထောင်ထားသည့် ရံပုံငွေများထဲ့မှ အချို့အားကူညီ ထောက်ပံ့ ပေးရန်တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာ တဲ့အတွက် နှစ်ဖက် ကိုယ်စားလှယ်များ အကြိမ်ကြိမ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး သဘောတူညီမှုများ ထားရှိက မိမိတို့ OIC အဖွဲ့ပိုင် ဘဏ္ဍာ အချို့အား ကူညီထောက်ပံ ပေးခဲ့ ကြောင်း ယခုအခါတွင် NLD ပါတီအနေဖြင့် မြန်မာအစိုးရ အဖြစ် သူနိုင်ငံကို ဦးဆောင်နေသည်မှာ ၄ နှစ်ကျော်ကာလ အထိ ရှိနေပြီဖြစ်သော်လည်း မိမိတို့ OIC အဖွဲ့နှင့် သဘောတူ ထားရှိခဲ့သည့် ကတိကဝတ် များအား ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း မရှိသေးသည့်အတွက် နှစ်နာ မှုတွေ များစွာ ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အတွက် မိမိတို့ OIC အဖွဲ့ချုပ်မှ နိုင်ငံတကာ ကတိကဝတ် များဖောက်ဖျက်မှု ဥပဒေ အရ NLD ပါတီ အစိုးရအား တရားစွဲဆိုနိုင်ရန် လက်မှတ်ထိုးတောင်းဆိုကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ကြောင်း ဆော်ဒီအာရေဗျ နိုင်ငံအခြေစိုက် သတင်း ဌာနတစ်ခုက ဖော်ပြလိုက်ကြောင်းသိရသည် ။
အစ်စလမ်မစ်နိုင်ငံ ၅၇ နိုင်ငံ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ OIC အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများ အဖွဲ့ အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ မှ NLD ပါတီအား၂၀၁၃ ခုနှစ်အစောပိုင်းကာလ များမှစတင်ပြီး ထောက်ပံ့မှုများပေးခဲ့ကြောင်း ၎င်းကူညီ များအတွက် NlD ပါတီနှင့် အပြန်အလှန်သဘော တူညီမှု များထား ရှိခဲ့ကြောင်း အဓိက အားဖြင့် ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်များ အားကူညီကာကွယ်ပေးရန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း အခြေချနေထိုင် နိုင်ခွင့် ရရှိရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးရန် အချက်များ ပါဝင်ခဲ့ပြီး လက်ရှိNLD အစိုးရအနေဖြင့် သဘောတူညီထားသည့်အချက်များကို ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိ တဲ့အတွက်တရားစွဲဆိုအရေးယူနိုင်ရေး အတွက် နိုင်ငံတကာ တရားရုံးများမှ တစ်ဆင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကြိုးစားဆောင်ရွက်သွား မယ်လို့ OIC အဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူ းချုပ် Yousef bin Ahmad Al Othaimeen(ယူစွတ် ဘင် အာမက် အယ်လ် အော်တိုင်းမင်း ) က OIC အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအကြီးအကဲ များ မျက်နာစုံညီ အစည်း အဝေးမှာ ပြောကြားလိုက်ကြောင်းသိရသည် ။
WWW.OIC.MYANMAR.cccccmf. [email protected] ×
ရွေးကောက်ပွဲ နီးလာတာနဲ့ အမျှ သတင်းအမှား ထုတ်လွှင့်မှုတွေကို ပြည်သူများ အနေနဲ့ ကိုယ်ပိုင်အသိတရားနဲ့ ချင့်ချိန်ပြီး အမြဲသတိ မပြတ် စောင့်ကြည့်ဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ရွှေဝါရောင် ဆရာတော် ဦးစန္ဒာသီရိ က မိန့်ကြားပါတယ်။
ဘာသာရေးလူမျိုးရေး၊ ပဋိပက္ခဖန်တီးပြီးမှ ရွေးကောက်ပွဲကို ပျက်စီးရာ၊ ပျက်စီးကြောင်းကြံဆောင်တာတို့၊ မိမိထောက်ခံတဲ့အဖွဲ့ကို မဲ နိုင်ခြေရှိအောင် ကြံဆောင်တဲ့အသိတရားကတော့ လုံးဝကို လက်ခံလို့မရဘူး။ …
NLD ပါတီအနေနဲ့ အစလာမ်ဘာသာဝင် နှစ်ဦးကို လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့ အပြီးမှာ ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး အရ ထိလွယ်၊ရှလွယ်တဲ့ သတင်းတု၊သတင်းအမှား တွေကို ဆက်တိုက်ဆိုသလို ဖြန့်ချိလာတာ တွေ့ရပါတယ်။
“ ဘာသာရေးလူမျိုးရေး၊ ပဋိပက္ခဖန်တီးပြီးမှ ရွေးကောက်ပွဲကို ပျက်စီးရာ၊ ပျက်စီးကြောင်းကြံဆောင်တာတို့၊ မိမိထောက်ခံတဲ့အဖွဲ့ကို မဲ နိုင်ခြေရှိအောင် ကြံဆောင်တဲ့အသိတရားကတော့ လုံးဝကို လက်ခံလို့မရဘူး။ဒါက ခပ်ညံ့ညံ့လူတွေရဲ့အလုပ်ပဲ ” လို့ ရွှေဝါရောင် ဆရာတော်ဦးစန္ဒာသီရိ က ငြမ်းမီဒီယာ ကို မိန့်ကြားပါတယ်။
သည် သတင်းအမှားတွေဟာ အာဏာရပါတီကို အကြီးမားဆုံး ထိုးနှက်ချက် ဖြစ်တယ်လို့ စီးပွားရေး နှင်ဥပဒေ လမ်းညွှန် ဦးတင်သန်းဦး က ဆိုပါတယ်။
” ကိုယ်စားလှယ်လောင်းစာရင်းကြေညာလိုက်တာနဲ့ သူတို့က ကုလား ပါတီ။ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း သတင်းတွေနဲ့အတူ ရိုက်ခတ် လာတဲ့ သတင်းမှားတွေလို့ပြောရမှာပေါ့။ ဖျက်လို ဖျက်ဆီး လုပ်ချင်တဲ့ သူတွေက ဒါမျိုး သတင်းတွေကို ရှာဖွေပြီး တင်တာလေ ” လို့ စီးပွားရေး နှင့် ဥပဒေ လမ်းညွှန် ဦးတင်သန်းဦး က ပြောပါတယ်။
“ ၂၀၂၀ မှာ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်ထဲက တချို့ကို NLD အနေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အဖြစ် သတ်မှတ်ရာမှာ လာဘ်ငွေကြေးရလို့၊ ဘယ်သူ က ပြောလို့ ဆိုပြီး သတ်မှတ်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး။ကျနော်တို့ မူအရ လုပ်တာ။ OIC နဲ့လည်း မဆိုင်ဘူး။ ဘယ်အစ္စလာမ် အဖွဲ့အစည်း နဲ့ မှ လည်း မဆိုင်ဘူး။ NLD ဟာ ဘာသာလူမျိုး မခွဲခြားဘူးဆိုတဲ့ မူပဲ ” လို့ မုံရွာအောင်ရှင် က ပြောပါတယ်။
ကျနော်တို့ ဘာသတိထားရမှာလဲဆိုတော့ရွေးကောက်ပွဲမှာ မရိုးမဖြောင့်တဲ့ သဘောနဲ့ အာဏာရပါတီကို လုပ်ကြံတာ၊ သူ့ကိုနည်းမျိုးစုံနဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ အထဲမှာ အဲဒီအသံတွေက ပိုပြီးကျယ်လောင်လာတယ်ပေါ့။နဂိုကတည်းက လူမျိုးရေး ဆတ်ဆတ် ထိမခံ ထိရှလွယ်တဲ့ တိုင်းပြည်မှာ အဲ့ဒါတွေကို ပိုသတိထားရမှာ လို့ စီးပွားရေး နှင့် ဥပဒေ လမ်းညွှန် ဦးတင်သန်းဦး က မှတ်ချက်ပြုပါတယ်။
တိုင်းကျော် သတင်း လို့ အမည်ရတဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ပေ့ချ်ဟာ သတင်း အမှားများနဲ့ NLD ပါတီ ကို အဓိကထား ထိုးနှက် တိုက်ခိုက်တာ တွေ့ရပြီး လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး သတင်း အမှားတွေနဲ့ တခြား သတင်းအမှား တွေကို ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိနေတဲ့ စာမျက်နှာ တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းကျော် သတင်း ပေ့ချ်ကို ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် ပလက် ဖောင်းမှာ ၂၀၂၀ ဖေဖော်ဝါရီ (၂၅) ရက်နေ့ က စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။
Tags: factcheck, NLD, OIC, သတင်းတု, သတင်းအမှား, အစ္စလာမ်
နိုင်ငံရေးသမားက ကိုယ့်အမှားကိုပဲ ကိုယ်ပြင်ရမှာ
နိုင်ငံရေးကို ရိုးရိုးသားသား ယှဉ်လို့မရတဲ့အခါမှာ …